Yusuf Garaad: Wareysigeygii Jaalle Siyaad
Waddada dheer ee Maka al Mukarrama ayaan ku dhacnay. Dhigta KM4 marka aan mareyno ayaa askar dhulka tuban oo daba-laabyo ku hubeysan aan ku soo dhex dhacnay. Mid ka mid ah ayaa na soo aaday, ka dib markii uu Yaasiin u hoggaansamay amarradiisii afka iyo tilmaanta gacanta isugu jiray ee ahaa “joogso" iyo "demi nalka”. Wadaha baabuurka kumuu leexan askarigu isaga oo malahayga mooda in ninka madaxda ah ee la sidaa uu hore fadhiyo.
Intii aanan u jawaabin ayaa Yaasiin Xaaji Ismaaciil oo aanan awal ogeyn in uu i dul taagan yahay uu jawaabay. Wuxuu yiri annagu waxaan leennahay "warshad" aan warka sii marsiinno ee yaan laga welwelin.
Posted by Yusuf Garaad at 07:23:00